Boliska Puntland oo markale weeraray Radio Daljir xarunteeda Boosaaso. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Ciidamo katirsan Dowladda ayaa si rasmi ah albaabada isugu laabay Xarunta Radio Daljir ee Boosaaso, Sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah howlawadeenada Xarunta.
Xalay ayay ahayd markii maamulka daljir uu sheegay in ciidamo aan wadan warqad fasax ah ay gudaha ugaleen xarumaha daljir ee Garoowe iyo Boosaaso.
Xilliga saakay la xirayay idaacadda waxaa la sheegay inay hawada kujirtay oo uu toos usocday howlaheeda shaqo.
Majiro hadal maamulka idaacada iyo dowladdaba kasoo baxay…
Previous articleDAAWO VIDEO :Allah Calool Xumo Badanaa Bal Daawo Bahdilaada Shacabka Laascaanood Taliska Soomaliland Dumar Iyo Rag +Qof Dhig Leh Ma Daawan Karo
Next articleDEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Xildhibaanno ka mid ah Somaliand oo Jawaab deg-deg ah ka bixiyay hadalkii Muuse Biix ee uu kaga laabtay Saldhiga Imaaraadka ee Berbera?
Ahmed September 16, 2019 At 6:16 pm
Xaarmaajo doqoniimadiisa xitaa waxa uu waayey Baasaboorkiisii Mareykan ahaa Sanadkiisii ugu danbeeyay oo laga xayuubiyaa. Imika markuu meesha ka huleeli xitaa Caruurtiisa Mareykanka kuma bookhan karo.
Miskiinah waan u naxeyblabo jeerba. Waa marka horee dulinimo iyo Bahdilaad badan ayuu usoo marey xejisanta Baasaboorkiisaas. UNta oo aadi kari waayay iyo Safiirkii Mareykanka oo Soomaaliya ugu Dawladeeyay isla isagii. Waa Madaxweynihii ugu horeeyay taariikjda intaan hubo ee Safiir ugu taga Safaaradiisa si uu uga soo qaato warqadihiisa. Marka labaadna waa Isagoo Baasaboorkuu ku mitidayay laga xayuubiyay sumcadna aanan ku helin Sharaf daro labaad oo ka raacdey mooyaane. Haduu Caqli ku filan leeyahay judhiiba wuu ka tanaasuli lahaa, atleast taasi waxey ahaan laheyd credit aaney weligiis cidi ka qaadi Karin. In badana wry ugu soo joogsan lahaayeen.
Kaas Faaruqa ah een dabadiisa iyo hortiisana kala garaneyn ayaad adna u calan waleysaa.
Iska lux Calanka sxb. Markuu tagona lasii dabo raac oo haka soo hadhin. Kkkk
Atoore September 17, 2019 At 3:56 am
Waa runtaa oo sida muuqata Ina farmaajo waa nin jilicsan ama an qaran hogaamin karin.Waa nin an masuul ka noqon karin wadan iyo dadkiis.Hase ahaatee waa ninka hargeeysa ka soo ooday ALBAABKASTA.
Dab La Riday September 16, 2019 At 7:02 pm
Farmaajo Rajaddi IDOORLAND ay lahaayeen wuu ka Toogtay weyna dhimatay Rajadaasu !
Maxa Talo u ah Reer ”’ SOO DHACYEEEY ”’
Dab La Riday September 16, 2019 At 7:56 pm
Weligay isma Oran Habar awal ila xadkaas bay u caqli xuntahay wale …. Bal waxaad eegta Somaliland aad sheegtid yaa haysta
1-Madaxweyne……. Habar Awal
2-Gaashaandhiga…… Habar awal
3-Maxkamadaha iyo distuurka…. Habar awal
Saddexdi hay’adood ee ugu sareysay somaliland waxa haysta Habar awal weliba jilibka Muuse biixi
How this is Fair For other Tribes ?
Mise sheekadu waa ”’ Laga Barey Laga Badi ”’ Dawladdi siyaad bare waxa lala yaabay marki wiilkiisi iyo raggi uu seediga u aha wadanka u wada dhiibay weliba kuwaasu wey dhaameyn dadka hadda laga hadlaayo !!!
mahad September 16, 2019 At 9:07 pm
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin carooday laga badi qofku hadii uu caytamo ama caroodo ama is indho tiro miyey wax ka bedeleysaa xaqiiqda waa may isaga iyo naftiisa ayuunbey culees iyo xanuun ku noqotaa waxay kaloo Soomaalidu tiraahdaa cuqdadi qofkeedeey dishaa allahuma najeynaa aad ayan kuu salaamay Suldaan Dab La Riday.
Ahmed September 16, 2019 At 9:47 pm
Mahad ninka labyidhaa. Anuu ma garan waxaad ka hadleyso. Xaarmaajo cay ma ahan. Waa iska naaneys sida aad idinba u yidhaahdaan Muuse Shaani ama Handaraaba.
Xaarmaajona jileeca ayaa loogu bixiyay. Waa waxba yahay ninku.
Dab La Riday September 16, 2019 At 11:04 pm
@ Caaqil Mahad
Salaan sharaf Caaqil aad baad ugu mahadsan tahay salaanta sharafta huwan.
Caaqil Mhadow ninka ahmed wata waa ninka ugu macquulsan Reerkan isaaq ee aynu halkan kula kaftano.
Weliba anigu waxaan doonayey in uu ka soo hadlo wixi aan soo weydiiyey.
Ahmed September 16, 2019 At 11:45 pm
Shaqaan ku Jiraa oo kama soo wada gaansiin karo.
Hadaanse kaaga jawaabi. Saaxiibow anagu dimiquraadiyad ayaanu qaadaney.
Madaxweynaha dadkaa soo doorta, isna waxa uu magacaabi karaa uun wasiiradiisa. Maxkamada Sare, Golayaasha Guurtida iyo Wakiilada awood uma laha inuu iska nadalo.
Maxkamada Sare ninka kunfadhiyaa intaan Muuse lasoo Dooran ayuu Kursiga kubfadhiyay. Muuse ma leh awood aharci oo uu xilka kaga qaado. Sidaanu Baashe iyo Saleebaan Gaal Goleyaashooda ugu tegi Karin ayaan Maxkamada Sarena u taanab Karin. Kaasi ha ku deyao.
Ta Difaaca. Dee wasiirkeedu waa Ciise. Hadaad Abaan duulaha Ciidamada u jeedo dee Muuse hortiis buu xilkaas hayay. Dhibna uma arko hadii uu meesha sii joogo iyo hadii la bedelaba. Waxey ku xidhan tahay Kolba siduu shaqadiisa u qabto. Wasiirkooda Difaaca ayaa Bedeli kara haduu Garto.
Waxa iskaga kaa khaldan Xilalka Madaxweynuhu magacaabi karo kana qaadi karo ama Awoodaha Madaxweynaha.
Wasiirada dhaliil laakiinse Ciidanka iyo lakabyada kale ee dowlada sida, Goleyaasha Xeer Dejinta iyo Garsoorka Dasduurkaa Cayimay. Taas Muuse dhaliil kuma yeelan karo.
Ahmed September 16, 2019 At 11:53 pm
Sxb Siilaanyo wuxuu lahaa 6 Wasiir oonan matnaba xilka ka degin oo wada HabarJeclo ahaa. Anigu wax dhaliil ah uguma heyn waayo Madaxweynuhu isagaa ikhtiyaarkiisa usoo magaabi kara ciduu doono. Allow muu walaalkiina Wasiir ka dhigi. Anigu waxaan eegaa uu ninku ma dhaweynayaa, haa hadey tahay ha fadhiyo meesha oo umada ha u wada shaqeeyo. Hadii kale hala weydaariyo Kursiga. Xitaa haduu walaalkey yahay oo fadhiid ah iga waloon difaaceyn.
Imika aniga my favorite Minister is Ninka haya Wasaada Beeraha ee Dadaalka badan ee Reer Awdal. Ninkaas meel adag ayuu Dawlada ugu jiraa. Shaqadiisiina si wacan ayuu unwadaa. Maayaradana ka Berbera ayaa number one iigu jira.
Dab La Riday September 17, 2019 At 12:36 am
Sxb Waxaad dhegeysata Ninkan Isaaq ee Liibaan samakatalis markaas wax ii sheeg Please.
Sucuudiga Iyo Pakistan oo Film Turki Ah Dartisa Xirirkooda Iskugu Jaray,Pakistan...
marqaan - June 4, 2020 0
Afartii Sarkaal ee Maraykanka Debad Baxayaasha Codsanayeen In La Xiro oo...
DAAWO VIDEO:Kooxdii waayaha Cusub oo Soo Qaaday Hees Muran Dhalisay Madaxweyne...
Maraykanka Sida Wax Uga Badalayo,Faruuska,Kacdoon Iyo Dhaqaalo Xumi,Aduunka Waji Kale Abuuraya
DAAWO VIDEO: 10 Muuqaal oo Ugu Yaabka Badnaa Banaan Baxyada Dalka...
marqaan - June 3, 2020 0